Bakhala ezimathonsi okudlwengulwe izingane zabo | News24
Bakhala ezimathonsi okudlwengulwe izingane zabo
KUFIKE umunyu, kwavuka izinseka komama babantwana ababili baseMpophomeni ngenkathi belandisa iphephandaba i-Echo mayelana nesehlakalo sokudlwengulwa kwalaba bantwana umsolwa uMnu Bhekumuzi Mbokazi (40) oyisakhamuzi kuyo le ndawo.
UNksz Nonhlanhla Dlamini no Nksz Nohlakanipho Khanyile bachazele leli phephendaba mayelana nokudlwengulwa kwabantwana babo kugeleza izinyembezi ngenxa yomunyu. Omama babantwana bathola zingu-18 ku Nhlangulana ukuthi abantwana babo banukubezwe umsolwa.
UKhanyile uchaze isenzo somsolwa njengesinesihluku njengoba kuvele ukuthi ngesikhathi kuthiwa edlwengula omunye umntwana oyedwa ubesuke obuka lo omunye odlwengulwayo ngaphambi kokuthi adlwengule omunye.
Ngokuchaza kukaKhanyile abantwana bebachazela bathe bebeboshelwe esihlalweni befakwe nendwangu emlonyeni ukuze bangamemezi njengoba lokho bethi babe bekuyalelwe umsolwa ngesikhathi ebavalele endlini yakhe lapho abadlwengulele khona ngesikhathi bephuma esikoleni.
Uthe ngokusho kwabantwana ngesikhathi edlwengula omunye, wayefake indwangu omunye emlonyeni embophele esihlalweni kodwa ebuka ngesikhathi kudlwengulwa omunye.
“Bathe ubadlwengule bobabili ebashintshanisa nokuthe angaqeda wathi uma beke basho uzobabulala bese ebulala nomama babo yingakho nje bebengafuni ukusho ukuthi ubenzeni,” kusho uKhanyile.
Eqhuba uKhanyile uthe eqala ukusola ngokwenzeke endodakazini yakhe kwaba umbala womchamo womtwana owabe unombala othi awube bomvu.
“Kuthe ngisaxakwe ilokho ngabona ukuthi uyaxhugela uma ehamba” usho kanje.
Uthe umbizile umntwana wabuza ukuthi ngabe kukhona yini okuyinkinga kodwa umntwana waphika wathi akanalutho.
“Ngibonile ukuthi ayiyincane into eyenzeke kumntwana wami ngakho-ke ngibe sengibheka esithweni sakhe sangasese ngoba senginokusola ukuthi kukhona okushaya amanzi.
“Nangempela ngithe uma ngibheka ngathola ukuthi umntwana une infection esithweni sangasese. Ngivele ngamphuthumisa kadokotela naye ofike waqinisekisa ukuthi umntwana unukubeziwe kanti unesifo socansi. Udokotela ungiyalele ukuthi ngiye emtholampilo wabantwana nalapho bafike bambheka umntwana nabo baqinisekisa. Kulapho-ke eveze khona ukuthi ubani omnukubezile, kwavela nokuthi ubehamba nomunye umtwana lo abanukubezwe naye,” kuchaza uKhanyile.
UDlamini ongumama womunye umntwana uthe yena uthintwe ngocingo umama walo mntwana obehambise umntwana wakhe emtholampilo emva kokuthola ukuthi umntwana wakhe ubehamba nomtwana wami ngenkathi edlwengulwa.
“Sebobabili bakusho konke okwenzile umsolwa kubona. Ngizwele ukuhlungu engingakeze ngibuzwe empilweni yami yonke. Angazi ukuthi yini le engaka esiyenze kuyena okwenze ukuthi enze into ebuhlungu kangaka ezinganeni zethu. Simfisela ukuthi abadle ejele angaphumi ngoba asikwazi ukuhlala nomuntu onjengaye emphakathini,” kusho uDlamini.
Ikhansela lendawo uMnu Bhana Ndlovu kuthe awumqede umphakathi ngaphandle kwenkantolo umsola ngokuthi ucheme nomndeni womdlwenguli